Nezvedu - Hebei JiaTian Import & Export Co, Ltd.
Hebei JiaTian Import & Export Co, Ltd.yakavambwa muna 2002, uye yakavakirwa muShijiazhuang guta, Hebei dunhu, yaiita zvipfeko zvekutengesa kunze kweanopfuura makore gumi. Yakave yakasimbiswa kwenguva refu bhizinesi kubata neEurope, South Africa nedzimwe nzvimbo uye zvigadzirwa kunyanya vacheche uye zvipfeko zvevana. kubvira payakatangwa, kambani yedu inonamatira kuchimiro che "kutendeseka uye kuvimbika" kutanga, zvinoshanda uye zvine hungwaru, takamira nemisimboti iyi, isu tinosimbisa kubatana uye kubatana nevatengi. Kambani inoteerera kuunganidza kurima nekumisikidza yakanakisa zviwanikwa zvevanhu, uye nekuedza kuyedza mushandi nehunhu hwakanaka hwekushanda, kuitira kuti kuvandudza kwekambani kuve noutano nekusimudzira kuenda kumberi.
Kugoverwa kwemusika kwemhiri kwemakungwa:
Kambani yedu inowana mukurumbira wakanaka mumusika wepasi rese. Iye zvino tinosimbisa hukama hwebhizinesi nevatengi kubva kumatunhu anopfuura gumi nemashanu nenzvimbo. Musika wedu mukuru uri muHong Kong, Europe neSouth Africa.
Vanopfuura makumi matatu vanogadzira, isu tine hupfumi hwezviitiko zvekugadzira zvigadzirwa zvekutengesa kunze uye zvakare tiine yakasimba mhando manejimendi manejimendi.
Hebei Jiatian Import uye Export CO., LTD inokura zvakanyanya nekukurumidza mukati memakore apfuura. Kukosha kwedu kwekutengesa kunze kwegore kunogona kusvika makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica.